Kwenza akukho mqondo ukubuza umuntu wesimanje, uma anakho wezigqoko jeans. Yiqiniso, kukhona. Futhi, cishe, awuwedwa. Le ngubo unqobile uthando emhlabeni wonke ukuze zithole induduzo yabo, ukusebenziseka nokuqina kwayo. Futhi ngokuvamile kwenzeka ukuthi jeans ozithandayo yisikhathi ngokuziphatha, kodwa ngokomzimba, njengoba indwangu okuqinile kungenziwa igqoke iminyaka. Kulokhu, kungasiza Remake of jeans ezindala: hhayi nje kuphela ingabe uvuselele umkhiqizo, kodwa futhi kuzodala isitayela esiyingqayizivele.
Izoqala nini ukwenza?
Nikeza ukuphila okusha jeans ezindala kuyadingeka uma kwenzeka ukuthi kungahlali kahle futhi engaboshiwe, kodwa yawela emfashinini. Ngemva kokuchitha konyaka noma emibili ekamelweni, lezi jeans ithunyelwa njengesipho kumngani noma umama noma amalungu ami ezigugile kuleli zwe. Awudingi ukwenza lokho, ngoba ngokungeza ezimbalwa izinto ezintsha kanye nomklamo aqabulayo, ungathola, into entsha langempela. Futhi izobiza ngempela ashibhe, futhi kwekilasi kuyoba entsha, jeans kahle fitting.
Ukuphila Okwesibili kungaba inikelwe izinto ichithekile. Ngokuvamile pair ozithandayo zokukhandleka besaziphilela kokuvela izimbobo, basuse izisihla noma kokuqina. uyisicefe ababhekene nesimo esinje kungabaduduza simaskwe jikisa izinzuzo. Futhi uma jeans zakho izodlala ngendlela entsha.
Ngezinye izikhathi ufuna ezinye ezihlukahlukene kanye nemibala fresh ukuthi sihluke yokuthi "bonke." Izandla zakhe angenza into ngokuphelele okukhethekile, okuzokwenza ukugcizelela isithunzi sibalo futhi ukunambitheka umnini wayo.
jeans ezindala nge izimbobo entsha
Uyasigcina isikhathi emuva ku fashion waklebhula jeans. Kuye Amathrendi, zamanje abe kancane ibhulukwe osugugile noma izimbobo okuqhubekayo ngentambo, abantu abaningi abafuni ukunikeza eningi. Thola into nemfashini ngaphandle izindleko eziphawulekayo ukusiza Remake of jeans ezindala.
Yenza kube lula ngempela:
ku jeans ahlanzekile kudingeka ucezu insipho noma wokulinganisa ukumaka indawo lapho ufuna ukubona sebeziqhumbuza bukhulu nofana ngobuncani;
zama ukuhleleka wokuqala ku jeans bakhathale, ukuze ukwazi ukugwema ukusikeka ezindaweni ungakhululekile hhayi enhle kakhulu;
ngobumnene usebenzisa sikelo ukwenza imigqa imbobo on the target;
inaliti ukudonsa intambo kanye emaphethelweni ukusika ukunikeza uhlobo shabby abanganaki;
ugeza jeans olusha e umshini wokuwasha nge umjikelezo spin, ukuze uthole okukhulu kwemvelo.
Khumbula ukuthi noma ukusikeka kanye emigodini jeans ukwandisa ekugcineni ngobukhulu, ngakho Ungeqisi it. ungakwazi thunga izimbobo ngaphakathi emhlabathini noma ezinemibala lace indwangu yokuthunga okwakhe ngaphezulu.
Jeans abe ...
A Remake ethandwa kakhulu jeans ezindala - a ukusoka umlenze for esifushane. Ngempela, kulula kakhulu ukwenza, vele ukhethe ubude oyifunayo futhi ngokucophelela usike umlenze trouser. A jini izikhindi - njalo into elungile kwekilasi.
Abakwazi kwenziwe ngenhla nje kwamadolo noma emifushane. Kubukeka stylish jini izikhindi nge imiphetho frayed. Ukuze uthole umphumela umphetho kuyadingeka emva ukusika onqenqemeni umlenze ukusingatha inaliti edonsa ngentambo transverse ukuze uthole ukubukeka oyifunayo.
Futhi, ungakwazi Umphetho noma onqenqemeni overlochit izikhindi, thunga kanye emaphethelweni lace noma usike. Ebonisa umcabango, ungathola into ukhululekile futhi original.
Ukuhlobisa kanye umhlobiso
Ngezinye izikhathi ukulungisa jeans akakwazi ukubhekana umsebenzi futhi buthule bethunga imbobo noma khuhla ibala engenzi uphume. Kulokhu, kungasiza izakhi okuhlobisa ukuthi ngeke kuphela ukuhlobisa jeans ezindala, kodwa futhi kungabonakali ukukhubazeka ezincane.
Sebenzisa kungaba izicelo ngomumo, phezulu emaphaketheni zokuhlobisa, rhinestones, ubuhlalu, glass ubuhlalu, umphetho. Hlobisa nge kuphela emaphaketheni futhi ezivuzayo, futhi ubukeka nice kakhulu sekugcineni tuck jeans. Decor nemiyalezo yonkana kobuso umlenze ibukeka iyintsha futhi yokuqala njalo.
Ungesabi ukuba ulinge: kabusha kwakhono lika jeans ezindala ukuthi kukhona emashalofini iminyaka, izokubonisa umsebenzi wabo, umqondo ngabanye isitayela ukunikeza into entsha stylish!